Factory Carrot - Mpanamboatra sy mpamatsy karaoty any Sina
Famaritana momba ny vokatra karaoty mofomamy: ny karaoty mahavoky dia tsy vitan'ny hoe manintona fotsiny, fa heverina ho sakafo ara-pahasalamana manohitra homamiadana, ny sakafo misy karaoty marobe, aorian'ny fidirany ao amin'ny vatana dia hovaina ho vitamina A, mety hitarika ny sela nihena be ny homamiadana, ary karaoty lignin miharo otrikaina koa no fanoherana anti-homamiadana, ka matetika ny olona mihinana karaoty meshed dia mety hisy fiantraikany amin'ny fisorohana homamiadana.
Famaritana ny vokatra karaoty: manodidina ny. Karaoty 5-7 isaky ny 1kg - fa ny tena izy dia mety miovaova. Ny karaoty dia azo hanina manta toy ny tsakitsaky, na masaka ary ampiasaina amin'ny lovia matsiro sy sakafo mamy sasany, toy ny mofomamy karaoty na muffins. Izy ireo dia azo ampangotrahina, haohina, endasina, hatsatsika, hasiana mofo, endasina na hafanana. Ny karaoty dia tokony ho masaka mandra-pahatonga azy ho malefaka nefa mbola somary mangatsiaka ihany. Na mahandro karaoty mandra-pahatonga azy ho malemy sy hofoana na hanadio azy ireo. Ny karaoty no loharanon-karena legioma manankarena indrindra, avy amin'ny beta-carotene. Karaoty salantsalany iray no manome mihoatra ny sakafo fihinana atolotra mandritra ny iray andro. Ny karaoty koa dia loharanon'ny fibres sakafo, vitamina c ary niacin.
Famaritana ny vokatra vovoka karaoty: karazan-tsakafo vita amin'ny vovoka karaoty dia karazan-tsakafo vita amin'ny vovoka voamadinika, ny akora fototra tena izy, dia ny karaoty. Ny vovoka karaoty dia misy vitamina C avo lenta, ary manankarena singa misimisy, afaka mitazona ny fiasan'ny voa, ary miaro ny maso. Ny tsiron'ny vovoka karaoty dia tena tsara, azonao atao ny mampiasa vovoka karaoty mba hamenoana ny sakafo mahavelona, ​​ary avy eo azonao atao ny mifehy ny metabolisma, ka ny rafitra fiarovan'ny vatana dia ao anatin'ny fepetra tsara kokoa. Mora mahandro tokoa ny vovoka karaoty, raha mbola maika ny handrahoana ny rano mangotraka